5 fomba Expo2020 dia hampisondrotra ny Economy any Dubai | Asa - Asa - Ekipa Travel
5 fomba Expo2020 hampiroborobo ny Toekaren'i Dubai
Affiliate Blogging ao Dubai
Hatramin'ny Oktobra 20, 2020, hatramin'ny April 10, 2021, ny Emirà Arabo Mitambatra dia handray ny tontolo ho fankalazana ny kolontsaina, fiaraha-miasa ary ny fanavaozana ao amin'ny 2020 Fair World Fair.
Izy io no fotoana voalohany hanatontosana ny World Expo ao amin'ny faritra Arabo, ary ny toerana misy azy dia ny tranonkala Expo 2020 ao Dubai. Hatramin'ny daty, ny totalin'ny firenena 190 dia nanamafy ny fandraisan'anjaran'ireo hetsika fampirantiana hampidirana olona an-tapitrisa ao amin'ny UAE. Ny foto-kevitra nofantenana ho an'ny Expo 2020 dia ny "Connecting Minds, Cre de the Future", miaraka amin'ireo sub-subdomains izay fanamafisana, Opportunity.
Ny Dia Expo 2020 dia nanjary ofisialy tao amin'ny 27th November 2013, raha nandresy ny zo hihaona am-pifaliana i Dubai, ny fankalazana sy ny fireharehana. Nisy fetim-pirenena nambara ho an'ny toeram-pampianarana rehetra manerana ny firenena ny ampitson'iny. Ity dia hampiseho anao ny maha-zava-dehibe ny fanambarana ary avy eo ny hetsika dia midika fa tsy ho an'i Dubai afa-tsy ny faritra UAE sy Afovoany Atsinanana. Ny tanjona dia ny hametrahana lova manan-danja sy maharitra izay haharitra hatramin'ny taranaka fara-fahatanorana amin'ny fotoana ofisialy ny Expo.
Sary: Expo 2020 Youtube
Ny firenena manaraka dia nanambara ny fandraisany anjara amin'ny Expo 2020:
Ny fanentanana ara-barotra sy ny fifandraisana dia mivoatra ary ny fitantanana amim-pahombiazana amin'ny sehatra maro. Nisy ny fanamafisana maromaro ny Expo tamin'ny superstars sy Ny orinasa sy ny orinasa maneran-tany dia efa naseho ny trano fonenany vaovao sy futuristic.
Ankoatra ny fampisehoana rehetra sy ny tranonkala, inona no mety ho fiantraikan'ny Expo 2020 amin'ny toekarena, ary inona no soa azo entina ho any Dubai?
Ny fantsom-pitondrana ofisialin'ny YouTube an'ny Dubai Expo 2020
5 fomba Expo2020 hampiroborobo ny Toekarena ao Dubai - Tsidiho ny YouTube fantsona 2020 Expo
Ny fahafahan'ny firenena hamorona asa dia endriky ny fisokafan'ny sekta ao amin'ny toekareny ary miasa. Rehefa noforonina ny fahafahan'ny asa, dia mitombo ny fahatokisan'ny mpanjifa izay mitombo ny fandaniana. Mihabetsaka ny orinasa ary miresaka amin'ny ankapobeny, afaka mankafy ny fomba fiainam-piainana manatsara ny toekarena ny ekonomia. Taorian 'ny fanambarana ofisialy ho toeram-pitsangatsanganana ho an'ny World Expo 2020 i Dubai dia noheverina fa ny 277, ny 149 asa dia tokony hamboarina eo anelanelan'ny 2013 hatramin'ny faran'ny Expo amin'ny 2021 miorina amin'ny fianarana.
Ireo asa ireo dia noforonina amin'ny sehatra rehetra amin'ny toekarena, anisan'izany ny Tourism, Retail, Finance, Real Estate, Fanorenana, Aviation, Hospitality, Teknolojia, Media & Fifandraisana, Fitaterana, Security, Varotra sy fampiasam-bola ary maro hafa. Ao amin'ny tranonkalan'ny 'Career' ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Expo2020 Dubai, misy safidy handefasana ny CV ary hampihatra ireo fahafahana maromaro azo atao. Ny fahafahana miasa dia afaka mialoha ny fampiratiana, mandritra ny vanim-potoana Expo sy post-expo.
Jereo ny fanokafana asa rehetra miaraka amin'ny Expo 2020
Efa an'arivony izao no ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny fananganana, teknolojia ary ny fitaterana satria mbola misy hatrany ny asa ao amin'ny tranokala Expo2020 sy ireo faritra hafa manan-danja miomana amin'ny volana 2020 amin'ny volana Oktobra. Asa maro hafa koa no noforonina tamin'ny fandraisan'anjaran'ireo firenena samihafa. Ireo mpikaroka ao Joba dia afaka manararaotra ireo fahafaha-manao ireo amin'ny fanatanterahana ny tantara.
Mivoatra ao amin'ny sehatry ny fizahantany
Ny fizahan-tany dia singa tena ilaina amin'ny fitomboan'ny toe-karena ao amin'ny toekarena Emirà Arabo. Araka ny Dubai ny Departemantan'ny Tourism & Marketing ara-barotra, Dubai dia nitazona fampiakarana roa isan-jato amin'ny fitsidihan'ny fizahan-tany raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Toy ny tamin'ny faran'ny fizarana voalohany tamin'ny 2019, dia nandray ny mpitsidika vahiny iraisam-pirenena 4.75 i Dubai.
Dubai dia mibaribary be ao amin'ny sari-tany momba ny fizahantany manerantany toy ny Burj Khalifa, hotely Palm and Burj Al Arab. Efa manana tranonkala ara-kolontsaina maro eran-tany UNESCO ny UAE, miaraka amin'ireo vohikala valo hafa tsy hita maso.
Ny fampiantranoana ny World Expo 2020 an'i Dubai dia ny hanatsarana ny firoborobon'ny mpizahatany any amin'ny firenena alohan'ny, mandritra sy aorian'ny Expo. An'arivony ny olona 25 tapitrisa no andrasana hitsidika ny Expo 2020 ao Dubai eo anelanelan'ny 20th Oktobra 2020 sy 10th April 2021.
Ny Dubai Corporation ho an'ny fizahantany ara-tsosialy sy ara-barotra (DCTCM) dia miara-miasa miaraka amin'ireo masoivohom-panjakana ao amin'ny governemanta mba hahafahan'ireo mpizahatany tonga any Dubai hahazoana fahazoan-dalana mora foana. Dubai no ivon-dàlana ho an'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny faritra ary fifandraisana mora ho an'ireo mpandeha eny an-dalana mankany amin'ny toerana iray maneran-tany.
Miaraka amin'ny World Expo 2020, nanjary sariaka kokoa i Dubai ho toy ny toeram-pizahantany, ary izany dia hitarika ho amin'ny fampihenana ny harin-karena faobe amin'ny fandrosoana ara-toekaren'ny firenena.
Fampitomboana ny fampiasam-bola
Mitombo ny fahatokisan'ny investisseur raha miroborobo ny toekarena ary maharitra. Araka ny angon-drakitra tsy miankina avy amin'ny sampan-draharaha matihanina amin'ny tambazotra iraisam-pirenena, EY, ny fampiasam-bola maharitra Expo 2020 Dubai amin'ny ho avin'ny firenena dia hampitombo ny toekariny amin'ny AED 122.6 miliara (USD 33.4 miliara) ary manohana ny taona 905,200 eo anelanelan'ny 2013 sy 2031.
Dubai dia mijery ny fitomboan'ny fampiasam-bola manerantany noho ny zon'izy ireo hampiantrano ny Expo2020. Lasa mahafinaritra ny fampiasam-bola any amin'ny firenena iray satria malaza ho mendrika, mahasoa, mahasoa. Ny Emira Arabo Mitambatra dia izany rehetra izany ary miharihary kokoa hatrany any amin'ny faritr'i Gulf sy Middle Eastern. Ny fampiasam-bola dia misokatra any amin'ny sehatry ny varotra, varotra, fananan-tany & fampandrosoana, vola, fialamboly, fizahan-tany, fanorenana, fampiantranoana, fiaramanidina ary maro hafa.
Efa orinasa maromaro no nanova na nanokatra sampana sy famoahana tao Dubai. Ny fanorenana dia mitaky amin'ny ankamaroan'ireo tetikasa ireo. Fikambanana iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena no mampifanaraka ny Expo sy ny mpiara-miasa aminy ofisialy amim-pireharehana amin'ny fikambanany amin'ny sehatry ny Marketing sy Branding. Ireo mpampiasa vola avy any an-toerana sy vahiny dia afaka matoky fa amin'ny World Expo 2020 natao tao Dubai, ny toekarena UAE dia miorim-ponenana, ary ny fampiasam-bolany dia azo antoka sy azo antoka ny fiverenana.
Fampitomboana sy fanatsarana ny orinasa eo an-toerana
Dubai dia trano fandraharahana marobe, miaraka amin'ny tompony ny UAE Nationals, ny mpivarotra ary ny mpampiasa vahiny. Maro ireo hevitra ao an-tokantrano ao an-toerana izay handray soa avy amin'ny fampiantranoan'i Dubai ny Expo 2020. Ny orinasa eo an-toerana dia fitaovam-piadiana amin'ny fitomboan'ny toekarena rehetra, ary ny governemanta maro dia mandany vola amin'ny fandrindrana sy ny fandaharan'asa fanombohana an-tsokosoko mba hamporisihana ny fandraharahana sy ny fivoaran'ny orinasa ao an-toerana. Ny fandraharahana Homegrown, na ny tambazotra iraisam-pirenena sy ny SME, dia andrasana hahita ny firoboroboana goavana amin'ny fampihenana sy fampiasam-bola amin'ny sehatra samihafa amin'ny Real Estate, Media, Travel and Tourism, Leisure, Retail, ary indostria ara-toekarena.
Misy ny fahafahana ara-barotra maromaro izay niparitaka nanerana ireo sekta rehetra ireo izay misy eny amin'ny tsena vaovao sy misokatra. Fomba maro ho an'ny mpiantok'asa eo an-toerana dia azo jerena amin'ny alàlan'ny bidy sy fanolorana doka izay azo alaina amin'ny fahafaha-manao fanangonam-bokatra. Ny Expo2020 dia manana tsena iraisam-pirenena amin'ny aterineto maimaim-poana izay ahitàna tombontsoa amin'ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ary indrindra mahasoa ny SME. Ity dia fomba mahomby ahafahan'ny orinasa eo an-toerana mikendry ny hamorona sehatra vaovao afaka mampiseho izao tontolo izao ny zavatra atolotr'izy ireo.
Fanatsarana ny fotodrafitrasa
Ny Expo2020 dia nahita fientanam-bahoaka goavana tao amin'ny fotodrafitrasa tao Dubai sy UAE. Ny fitaterana mitondra mankany amin'ny tranonkala Expo toy ny làlana, metro ary tetezana dia novelarina sy nanatsara. Misy tetikasa maro mitohy amin'ny fanorenana hotely, fonenana, fikarakarana ara-pahasalamana ary trano fambolena hafa.
Ny vaovao azo omena dia maneho fa ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ilay toerana dia azo averina indray, ary ity fandraisana andraikitra maharitra ity dia fantatra amin'ny hoe 2020 Distrika taorian'ny Expo. Ny fametrahana ny fotodrafitrasa sy ny fampiroboroboana ny Expo dia hampifandray amin'ny lohahevitry ny Sustainability, Mobility and Opportunity. Ny tranonkala koa dia akaiky ny Al Maktoum International Airport, Dubai World Central (DWC) ao Jebel Ali ary izany dia hanamora ny fitaterana ny mpitsidika sy ny mpampiasa vola.
Mbola ampiasaina aloha ny fotodrafitrasa, mandritra sy aorian'ny Expo; ary hampitombo ny orinasa sy ny toekarena amin'ny ankapobeny.
5 fomba Expo2020 hampiroborobo ny Toekaren'i Dubai,
Ny fampahafantarana ny biletà dia efa nivoaka tamin'ny vary samihafa amin'ny 1day, 3 andro, ny isam-bolana sy ny fizaran-taona. Hisy ny fihenam-bidy ho an'ny tanora sy mpianatra; ary fahafahana miditra malalaka ho an'ny olona manana fanapahan-kevitra, olon-dehibe 65 sy ambony, ary ankizy hatramin'ny taona 5.
Ny World Expo 2020 dia nanome an'i Dubai ny fifantohana tsara sy ny lazany izay ilainy hanamafisana ny fahatokisana maneran-tany ho an'ny mpiray monina sy vahiny. Nanamafy ihany koa ny fahatsapana ho reharehan'ny olom-pirenena UAE sy ny mponina izy ary hamela ny lova maharitra maharitra eo amin'ny fitomboan'ny kolontsaina sy ara-toekarena.
Avy amin'i: Theresa R. Fianko
Ny Company Dubai City dia manome torolalana tsara ho an'ny Jobs ao Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Jobs in Dubai Guides. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.